Banner Mockup | Hal-abuurka khadka tooska ah
Encarni Arcoya | 16/05/2022 13:10 | Khayraadka
Naqshadeeye garaaf ahaan, waa inaad macaamiisha tusto naqshadahaaga. Dhibaatadu waxay tahay in marar badan aan ka fikirno naqshad uu macmiilku jeclaan doono oo ay kuu sheegaan: "Ma arko". Oo ma garanaysid waxaad ka jawaabto sababtoo ah way fududahay, markaa maxaad ula xiriirin weyday astaantaada ama shirkaddaada? Waxaa jira sabab, oo ay tahay in qaar ka mid ah Way ku adag tahay iyaga marka loo eego kuwa kale inay fikrad ka helaan waxaad rabto inaad siiso. Taasna, waxba kama roona jeesjeeska. Laakiin maxaa dhacaya haddii lagu xayeysiinayo nalalka waddooyinka? Dhib malahan, waxaad haysataa banner ama banner majaajillo ah oo si fiican kuugu shaqayn doona.
Haddii aadan weli si cad u arkin, laakiin aad xiisaynayso fikradda, iyo gaar ahaan inaad haysato ilo aad ku muujiso naqshadahaaga qaab aad u macquul ah, ka dibna sii wad akhrinta sababtoo ah tani waxay ku xiisaysaa, iyo wax badan.
1 Maxaa loogu talagalay jeesjeeska banner?
2 Banner Mockups
2.2 Mockup Banner Fabric
2.3 Banner Mockup Set
2.4 Calan shiraac ah oo ku yaal xargaha laambadaha
2.5 Mockup Banner Square
2.6 Majaajilo Banner Magaalada
2.7 Banner Mockup oo kala duwan
2.8 Naqshadaynta halbeegga
Maxaa loogu talagalay jeesjeeska banner?
Horaan uga hadalnay banner majaajillo ah. Laakiin waxaa laga yaabaa inaadan xitaa garanaynin waxa uu yahay jeesjees oo aadan xitaa garanayn waxa uu yahay banner (inkasta oo kan dambe uu u ekaado mid aad taqaan).
Jees jees waa isku darka u dhexeeya naqshadayntaada iyo muuqaalka dhabta ah. Tusaale ahaan, qiyaas in ay tahay in aad samaysato dabool buug. Oo waa inaad u muujisaa daabacaha ama qoraaga. Tani, iyada oo la arkayo daboolka iyada oo aan lahayn wax dheeraad ah, waxay u muuqan kartaa mid qurux badan ama fool xun. Laakiin haddii aad u soo bandhigto in montage la gabar ama wiil reading iyo cover la arko sida ay u eegi lahaa on buug jireed, wax isbedelaan.
Hagaag, jeesjees waa matalaadda dhabta ah ee naqshadahaaga. Waxayna ka dhigaysaa macaamiishu inaysan si aad ah u fikirin, liddi ku ah, waxaad iyaga siisaa oo aad ka caawisaa inay aqbalaan weyn ku yeeshaan naqshadahaaga.
Hadda, waa maxay banner majaajillo ah? Waayo, Waa in aad ka fikirtaa boodhadhka sida caadiga ah lagu dhejiyo tiirarka laambadaha, ama in ay laba wada noqdaan ama kala tagaan, iyo in marka ay hawadu jirto ay dhaqaaqaan. Ma adiga ayay u egyihiin? Taasi waa banner, sidaas darteed, jees-jees noocan oo kale ah waxay noqon doontaa matalaadda muuqaalladaas.
Horay ayaanu kuugu haynay; waad garanaysaa waxa ay tahay majaajilo, banner iyo isku darka labadaba. Laakin ma aha oo kaliya in ay halkaas sii joogaan laakiin waxaan raadineynaa wax dheeraad ah. Maxaa intaas ka badan? Hagaag, ku sii tusaalayaal banner-ka jeesjeeska ah oo aad isticmaali karto haddii macmiilku waligiis kuugu yimaado codsigan oo aad rabto inaad u soo bandhigto naqshadahaaga qaab gebi ahaanba ka duwan.
Halkan waxaan kuugu dayn dhowr.
Talada ugu horreysa ee aan ku siinno waa inaad Freepik. Haddii aad ka raadiso bangigan sawirka (bilaash iyo lacag la'aan), waxaad ogaan doontaa taas Waxa uu leeyahay tusaalayaal banner badan oo jeesjees ah oo aad isticmaali karto (maxaa yeelay waxaa jira lacag la'aan) iyo kuwa kale oo ay tahay in la bixiyo, inkasta oo kharashku aanu ahayn mid aad u badan.
Iyadoo ku xiran meesha naqshadeyntaadu tahay, waxaad sharad ku sameyn kartaa sawirada qaar ama kuwa kale, halkan waxaad dooran doontaa iyadoo ku xiran waxa aad raadineyso ama waxaad soo ururin kartaa dhammaan kuwa suurtogalka ah ee macaamiisha kala duwan ee kuu iman doona.
Mockup Banner Fabric
Xaaladdan oo kale, sawirku wuxuu ku tusayaa bannaanka meel ay ku dhejiyeen boor si ay u soo jiitaan dareenka. Markaa Waxay ka samaysan tahay maro, waxaana lagu qabtaa kor iyo hoos labadaba si aanay u dhaqaaqin.
Aad bay u fududahay laakiin runtu waa taas Mararka qaarkood kuwa fudud ayaa aad u badan. aad ku leedahay Qaabka PSD oo waxa ku jira lagu beddelaa shayga caqliga leh. Markaa wax badan kuma kici doonto inaad nakhshadkaaga dhigto oo aad aragto sida ay u egtahay.
Soo dajisyada Halkan.
Banner Mockup Set
Halkan waxaa ah sawiro kala duwan oo lagu majaajilo laambad waddo ah. Kuwaas waxaa lagu sifeeyaa in boodhadhku had iyo jeer la saaro tiirarka laambadaha, marna mid dhinac kasta ah, marna hal kaliya oo ku wareegsan qaab-dhismeedka. Iyo marar kale oo hoos laga sii daayo si ay u soo jiitaan dareenka (tusaale, in ay tahay xayawaanka oo waxay go'aansadeen in ay dabada ku dhejiyaan 3D. Marka ay dhaqaaqdo waxay ku siinaysaa dareenka in ay nooshahay.
Markaa waad soo dejisan kartaa Halkan oo bal eeg haddii ay mudan yihiin.
Calan shiraac ah oo ku yaal xargaha laambadaha
Marar badan macaamiisha Ku waydiisan maayaan hal banderole, laakiin waxay ku waydiinayaan lammaane. Waayo, waxay ku talo jiraan inay soo laadlaad laambadaan korkooda si midba kan kale ugu daro. Haddii taasi dhacdo, waxaan leenahay tan majaajilada nalka waddooyinka oo leh banner laba jibaaran in, sida aad arki karto, mid la mid ah kan kale, kaliya asalka ayaa isbeddelaya. Laakiin waxay ku siinaysaa fikrad ah sida ay u ekaan doonto.
Waad heshay Halkan.
Mockup Banner Square
Xaaladdan oo kale Uma eka banner, laakiin runtu waxay tahay in sidaas la samayn karo. Sida aad arki karto, waxay leedahay taageero ay ku dhejisan tahay banner waxayna leedahay naqshad ka duwan kuwa caadiga ah ee leydi ah.
Majaajilo Banner Magaalada
Tusaale kale oo aad u kaydsan karto kheyraad ahaan waa calamadan majaajilada ah ee ka tagaya magaalo gadaal, waxaana laga yaabaa inay ka run badan tahay kuwa kale ee diiradda saaraya xayeysiinta kaliya. Halkan, inkasta oo ay u eg tahay montage meelaha, waxay ku siinaysaa fursad aad uga fikirto sida ay u ekaan doonto dhismayaasha fogaanta.
Waxaad ku haysaa PSD waxaana lagu kaydiyaa lakabyo si aanay kuugu adkaan inaad beddesho waxaad u baahan tahay. Intaa waxaa dheer, waxaad u isticmaali kartaa arrimo shaqsi iyo / ama ganacsi, inkasta oo ay kaa codsanayaan inaad xidhidhiyaha geliso.
Waad soo dejisanaysaa Halkan.
Banner Mockup oo kala duwan
Middaan waan ka helnay, waanan kuu keenay, ma aha oo kaliya sababtoo ah Waxaad bedeli kartaa asalka oo waa xallin sare, laakiin sababtoo ah waa hal abuur waxayna ku siinaysaa dhawr boodhadh oo xagga hore ah si looga tago dadka kale nooc ka mid ah jardiinooyinka iyo dhismayaasha.
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay kaliya banner, halkan waxaad haysataa nashqadan. Waxay inta badan diiradda saartaa calanka, oo ka tagaysa asalka sidii haddii ay tahay samada. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay naqshad kale oo aad yeelan doonto lammaane.
Waa run in aanay jirin noocyo badan oo ka mid ah majaajilada noocan ah sida kuwa kale, laakiin ugu yaraan waxaanu ku siinnay agab si aad u hesho banner majaajillo ah oo aad u soo bandhigto macmiilkaaga si ay u arkaan naqshaddaada si dhab ah. Ma ku talinaysaa mid kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » banner majaajilo